Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း)
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
• Amebiasis ဆိုသည်မှာ အူးအတွင်း၌ protozoan Entamoeba histolytica, or E. histolytica ဆိုသော ကပ်ပါးပိုးများ ကူးဆက်ခံရမှုကြောင့် ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Amebiasis ရှိသောလူအများစုသည် ထင်းရှားသည်လက္ခဏာများကိုမခံစားရပဲ တစ်ချို့တွင်မူ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများ ခံစားရတတ်၏။
• အူမကြီးသည် ကပ်ပါးပိုးများအတွက် အကြိုက်နေရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းမရှိသည့်နေရာမျိုး ကူးစက်ခံထားရသည့်လူများ၏မစင်များနှင့်ထိတွေ့နေရသည့်နေရာမျိုးတွင် ရေမှတဆင့် ကူးဆက်လာနိုင်ပါသည်။ မစင်ကို မြေသြဇာအဖြစ်သုံးစိုက်ထားသော အသီးအရွက်များမှလဲ ကူးစက်နိုင်သည်။ လက်ညစ်ပတ်များမှလဲ တခြားသူများကိုကူးစက်နိုင်သည်။
• ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၁၀% ခန့်သည် အမီးဘားပိုးကူးစက်ခံရပြီ အထူးသဖြင့် မက္ကစီကို၊ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကအလည်ပိုင်း၊ မြောက်အမေရိက၊ အာဖရိကနှင့် အာရှမှအပူပိုင်းဒေသများတွင် ပိုတွေ့ရပါသည်။ စက်မှုနိုင်ငံများတွင် Amebiasis ကို ထိုရောဂါရှိသောဒေသမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူများ ခရီးသွားများထံတွင် တွေ့ရများ၏။
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရောဂါအခြေအနေသည် လုံးယဝသာမာန်သာဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်မရွေးကူးစက်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
• ၉၀%သောဖြစ်ရပ်များတွင် အမီးဘားပိုးကူစက်ခံရရုံနှင့် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ အမီးဘားပိုးဝင်ပြီး လအတော်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာများပြတတ်ပါသည်။ လက္ခါများသည် မပြင်းထန်သော ဗိုက်နည်းနည်းနာခြင်း ဗိုက်တဂွီဂွီမြည်ခြင်းမှ ပြင်းထန်သောလက္ခများဖြစ်သည့် အပြင်းဖျားခြင်း၊ ဗိုက်လှိမ့်နေအောင်နာခြင်း ဝမ်းတစ်နေ့လျှင် ၁၀ ကြိမ်ခန့်သွားခြင်းတို့ထိ ပြတတ်ပါသည်။ စံပြအနေနှင့် ဝမ်းသည် ရေဆန်ပြီး သွေးနှင့်အကျိအချွဲများ ပါတတ်ပါသည်။
• အသည်းကိုပိုးရောက်သွားပါက အသည်းတွင်းပြည်တည်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဖျားခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အထက်ပိုင်းနာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့် အသည်းကြီးခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ပြတတ်ပါသည်။
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
• E. histolytica ပိုးသည် ဆဲလ်တစ်လုံးပါ protozoan ဖြစ်ပြီး အကောင် cysts များသည့် အစားအစာနှင့်ရေများကို စားသောက်မိခြင်းမှကူးစက်တတ်ပါသည်။ ကူးစက်ရန်နောက်တစ်နည်းမှာ မစင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိခြင်းဖြစ်သည်။ Cysts ဆိုသည်မှာ ကပ်ပါးကောင်၏ထိုးဖောက်ဝင်နိုင်သည့်အဆင့်ဖြစ်ပြီး မြေဆီလွှာအတွင်း၊ မစင်စွန့်ထားသည့်ပါတ်ဝန်းကျင်အတွင်းတွင် လပေါင်းများစွာကြာအောင် ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။ အဏှကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်မှမြင်ရသည့် cysts ကို မြေဆီလွှာ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မစင်နှင့်ထိတွေ့ထားသည့်ရေ စသည်တို့တွင်တွေ့ရပါသည်။
• စအိုနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ် သို့ အူမကြီးအတွင်းလွှာတိုက်စားခံရစဉ်တွင် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားသည်။
• Cysts များကိုယ်တွင်းသို့ရောက်သည့်အခါ အစာခြေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် နေထိုင်ကြ၏။ ထို့နောက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် Trophozite အဆင့်ကိုပြောင်း၏။ ထိုမှ ကပ်ပါးကောင်းသည် အစာခြေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမျိုးပွားပြီး အူမကြီးသို့ရွေ့သွားသည်။ ထိုနေရာတွင် အူနံရံအား အခေါင်းဖောက်ပြီးဝင်သွား၏။ ထို့ကြောင့် သွေဝမ်းသွားခြင်း၊ အူရောင်ခြင်းနှင့် တစ်ရှူးပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
• ကူးစက်ခံရသူသည် မစင်မှတစ်ဆင့် ပါတ်ဝန်းကျင်သို့ cysts များကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ရောဂါပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။
• Trophozites များ အူနံရံများသို့ရောက်သည့်အခါ သွေးကြောထဲသို့ဖောက်ဝင်သွားပြီး တစ်ခြားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအမျိုးမျိုးဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အတွင်းအင်္ဂါတစ်ခုအား ဖောက်မိသွားပါက အောက်ပါအခြေအနေများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
• သန့်ရှင်းမှုမဖွံ့ဖြိုးသော အပူပိုင်းနိုင်ငံများ
• သန့်ရှင်းမှုမရှိသည့် အပူပိုင်ဒေသများသို့ ခရီးထွက်သူများ
• သန့်ရှင်းမှုမဖွံ့ဖြိုးသော အပူပိုင်းနိုင်ငံများမှ ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများ
• သန့်ရှင်းမှုမရှိသည့်ဌာနများတွင်နေသူများ ဥပမာ ထောင်
• ခုခံအားကျဆင်းနေသူများနှင့် တခြားရောဂါရှိနေသူများ
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း
) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
• E. histolytica ပါရှိမှုကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် ဝမ်းစစ်ဆေးမှုသုံးခါ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဖြစ်ရပ်အများအပြား၌ ဝမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့အထူးဖြစ်ရပ်များတွင် ရောဂါအမည်မတပ်ဖို့မသေချာသည့်အခါ စအိုနှင့်အူမကြည့်မှန်ပြောင်းနည်းကို အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးရန်နှင့် အသားစယူစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆရာဝန်အားခွင့်ပြုပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီစစ်ဆေးမှုများတွင် ဆရာဝန်က အလင်းပါသည့်ကိရိယာတစ်ခုအား စအိုမှထည့်ကာ အစာဟောင်းအိမ်နှင့်အူမကြီးကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
• သွေးစစ်ဆေးခြင်း။ ဒီစစ်ဆေးမှုအား ရောဂါပိုးသည် အသည်းကဲသို့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆီသို့ အူနံရံကိုဖောက်ဝင်မှသာ စစ်ဆေးရမည်။ သို့သော် သွေးစစ်ဆေးမှုသည် ဟိုးယခင်က အမီးဘားပိုးကူးစက်ခံရဖူးပါက ယခုမရှိတော့သော်လည်း Positive ထွက်နေတတ်ပါသည်။
Amebiasis (အမီးဘားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
• Amebiasis ကိုပိုးသတ်ဆေးတစ်ချို့နှင့်ကုသနိုင်ပြီး သမားတော်ညွှန်သည့်ကုထုံးကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးဘယ်နှမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာ သင့်အခြေအနေပေါ်သာမူတည်ပါသည်။
• အကယ်၍ ကပ်ပါးကောင်းများသည် အူတစ်ရှူးများကိုပါကူးစက်နေပါက အစာခြေစနစ်ကိုသာမက ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးပါစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လျှင်ကုသမှုခံယူရပါမည်။
• အူမကြီးနှင့်ဝမ်းတွင်းတစ်ရှူးများပေါက်ထွက်သွားပါက ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အဘီးဘစ်ဝမ်းကိုက်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
• သန့်ရှင်းမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည် Amebiasis မဖြစ်စေရန် သော့ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အစားအသောက်ပြင်ဆင်စားသောက်မည်ဆိုပါက အောက်ပါနည်းများကိုလိုက်နာပါ။
• သစ်သီးနှင့်ဟင်းရွက်များကို မစားခင် သေချာဆေးကြောပါ။
• ကိုယ်တိုင်မဆေးပဲအခွံမခွာပဲနှင့် သစ်သီးနှင့်ဟင်းရွက်များစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
• ရေ့သန့်နှင့် အပျော့စားသောက်စရာများကိုသာသောက်ပါ။
• ရေသောက်မည်ဆိုပါက အိုင်အိုးဒင်းခတ်ခြင်း ကြိုချက်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
• ရေပိုက်မှသောက်ခြင်း ရေခဲတုံးစားခြင်းကိုရှောင်ပါ။
• နွားနို့ ချိစ်နှင့် pasteurized လုပ်မထားသည့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ပါ။
• ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအနေနှင့် အိမ်သာတက်ပြီးနှင့်အစာမစားမှီအချိန်တွင် လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်သေချာ ဆေးကြောပါ။
Amebiasis http://www.healthline.com/health/amebiasis#Overview1. Accessed December 24,2016.
Gastrointestinal amebiasis. https://www.drugs.com/health-guide/gastrointestinal-amebiasis.html.
Accessed December 24, 2016.
What is amebiasis?. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/amebiasis-overview#2. Accessed